Nwere ike imewe, Inweta ya ziri ezi | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 10, 2013 Fraịde, Ọgọstụ 9, 2013 Douglas Karr
Dị ka Wikipedia, nhazi mmeghachi omume bụ usoro nhazi weebụ nke ebumnuche maka saịtị ịmepụta iji nye ezigbo ahụmịhe nlele-ọgụgụ dị mfe na igodo na iji opekata mpe, panning, na ịpịgharị-gafee ọtụtụ ngwaọrụ (site na kọmputa kọmpụta desktọọpụ na ekwentị mkpanaaka). Nhazi mmeghachi omume na-ewu ewu nke ukwuu ebe ọ bụ na ọ chọghị onye nrụpụta ka ịmepụta ọtụtụ ihu na saịtị maka mkpanaka, mbadamba na desktọọpụ. Imepụta ihe na-eji usoro HTML na CSS kachasị ọhụrụ iji gbanwee atụmatụ ahụ na-akpaghị aka na nlele.
Ihe niile gbasara idebe ihe ndị ọbịa chọrọ, ma ọnweghị nke ha na-achọghị. Enweghị ohere maka eserese na-atọ ụtọ, igodo na-agbagwoju anya, ma ọ bụ peeji ndị ekpochiri n'ime naanị mkpebi. Ndị na-eji ekwentị achọ ka Intanet ha dabere, na-adị ọcha, ma dịkwa nha maka ihuenyo ha.
Ntughari nzaghachi chọrọ onye mmebe weebụ nwere ahụmahụ nwere ihe ọmụma nke teknụzụ na atụmatụ tupu ị nweta nlele na nlegharị anya nke saịtị ahụ. Ọ na-enwe ekele site na search engines ma bido itinye otutu ihe n’etiti ime ihe ochie n’ulo akwukwo na nke ohuru na nke kachasi. WhoIsHostingThis achịkọtala ihe omuma ozi a na nhazi nzaghachi na nyocha maka ịmejuputa nke ọma.
Tags: mobile imewemobile web imeweanabatanhazi mmeghachi omumembadamba mbadambambadamba weebụ imewe
Curata: Ọdịnaya dị mkpa maka azụmaahịa gị.